Usuku Lukazwelonke Lwe-French Fry! Nakhu lapho ungathola khona amafrimu amahhala nezinye izaphulelo - Wayback Burgers
Yeqela kubha eseceleni eyinhloko
Thola i-Wayback App
Vala Imenyu Yokuzulazula
Usuku Lukazwelonke Lwe-French Fry! Nakhu lapho ungathola khona amafrimu amahhala nezinye izaphulelo
Julayi 28, 2021
Amazambane athosiwe angakudala futhi ayindlela esheshayo yokwenza ibhega ijabule kakhulu. Kodwa mhlawumbe okujabulisa kakhulu kune-oda lamafrimu yilapho lawo mafrimu ekhululeka.
I-National French Fry Day, egujwa ngoJulayi 13, yileso senzakalo. Ukuhlonipha uhlangothi olunesitashi oluyintandokazi yawo wonke umuntu, amaketanga kazwelonke anikezela ngenqwaba yamafrimu amahhala. Kungase kube izaba zohambo lomgwaqo, ukuze nje uzame zonke!
Le yindawo ka Arby
Lolu chungechunge luhlinzeka nge-oda elikhulu lamahhala lokuthosiwe ngokuthenga uma ubonisa i- imeyili yokuphromotha . Lesi sivumelwano sihle kuwo womabili ama-curly cut fries, kuze kube nguJulayi 18.
Indawo yokudlela yase-Buffalo
Lolu chungechunge lwaziwa ngama-curly fry, futhi lunikeza izivakashi i-oda lamahhala ngokuthenga ku- inthanethi okufakwe ngoJulayi 13 ukuze kuhlonishwe Usuku Lukazwelonke Lwe-Fry French.
Ama-bacon cheeseburgers nama-fries angabangani abalungile futhi ngokunikezwa okuqhubekayo kuklabhu yephromo ye-Carl's Jr. , thola amafriji amancane amahhala nesiphuzo ngokuthenga i-Western Bacon Cheeseburger yabo.
Checkers & Rally's
Le ndawo yokudlela ye-double drive-thru ibungaza i-National French Fry ngendlela ejabulisayo. Banikeza ama-dollar athosiwe, kungakhathaliseki ukuthi uthenga usayizi onjani! Okungcono nakakhulu, idola elisuka kulawo ma-oda wokuthosa lizonikelwa ngokuqondile ku-No Kid Hungry (kufika ku-$100,000).
Sekuyisikhathi sokudla! Noma ubani osebenzisa u-$20 noma ngaphezulu kwa-Elevation Burger uzothola ama-oda amahhala athosiwe kusukela ngoJulayi 12 kuya kuJulayi 18.
Thola i-oda lamahhala lamafrikhi athosiwe nganoma yikuphi ukuthenga kusuka ngomhlaka-12 Julayi kuya kumhlaka-18, amahle esitolo nangokuthenga ku-inthanethi.
Le yindawo ka Hardee
I-National French Fry Day ingaba nganoma yisiphi isikhathi ofuna ibe ngayo kulolu chungechunge. Bhalisela i-newsletter yabo ye- imeyili , futhi uthole isigqebhezana samahhala amancane athosiwe nesiphuzo ngokuthenga kwe-Angus Burger yabo yoqobo.
I-Hurricane Grill & Wings
Uzizwa umnandi? Lesi sivumelwano singukulungiswa okuphelele. Thola i-oda lamahhala le-Garlic n' Parm Fries ngokuthenga ku-inthanethi okungu-$30 noma ngaphezulu ngoJulayi 13.
Amafrimu amise okokuzijabulisa angajabulisa kakhulu, ingasaphathwa eyomnandi. Thola i-oda lamahhala lama-curly fries ane-oda kuhlelo lokusebenza ngoJulayi 13.
Umbhishobhi wamakhekhe okudla okusheshayo unikeza i-oda lamahhala lamafrikhi ngoJulayi 13, ngesivumelwano sohlelo lokusebenza lwemiklomelo yochungechunge . Ngenkathi ulapho, ungakhohlwa ukungenela umncintiswano wabo , lapho othile ezowina amafrimu impilo yakhe yonke.
Lolu chungechunge seluthandwa kudala ngenxa yokugcwalisa kwamahhala, okungenamkhawulo kumafrikhi angenalutho, futhi labo abathenga ikhadi lesipho ku-inthanethi ngomhla ka-7/12 kuya ku-7/18 bazothola u-10% wesaphulelo sika-$25 ubuncane bokuthenga.
Lesi yisivumelwano esisodwa ozofuna ukweqa kuso. Kulolu chungechunge, wonke ama-Smash Fries osayizi abajwayelekile, okuthosiwe okujwayelekile kanye nama-sweet potato ayi-$1 uma uthenga ibhega noma isangweji. Njengebhonasi, imali etholwe kumafrimu angu-$1 izoya kumaKlabhu endawo Abafana Namantombazane.
Thola okuthosiwe osayizi abavamile bamahhala uma uthenga ibhega, ngephromoshini yohlelo lokusebenza lwe -chain .
Thola i-oda elikhulu lamafrimu ngokuthenga ngokunikezwa kwangaphakathi nohlelo . Ukuze uthole amazambane akho amahhala amakhulu, vele ungeze okunikezwayo ku-oda lakho leselula noma uskene endaweni yokudlela.
Ukudla kwamahhala akuyeki ukuba mnandi. Kulolu chungechunge, thola amazambane athosiwe amahhala nganoma yikuphi ukuthenga ngokuhlonipha uSuku Lukazwelonke Lwe-Fry French.
Ulwazi Lokudla Okunomsoco
Thenga Imibuzo Evame Ukubuzwa
Izinqubomgomo Zokuthumela Nokubuyisela
Uzakwethu oziqhenyayo we-Boys & Girls Clubs of America.
© 2022 Wayback Burgers.
Wonke Amalungelo Agodliwe.
Copyright © 2022 · Wayback Burgers (Genesis Child) on Genesis Framework · WordPress · Log in